Qodobbada David Blume ee Martech Zone |
Maqaallada by David Blume
David waa Madaxweyne Ku-Xigeenka Isbahaysiga Istaraatiijiyadeed ee Qvidian, oo mas'uul ka ah maaraynta qorista iyo koritaanka shirkadaha istiraatiijiyadeed ee shirkadda. David wuxuu ku takhasusay dhinaca waxtarka iibka meelaha sida maaraynta magdhawga iyo soo-jeedinta otomaatiga.
Jimco, Oktoobar 10, 2014 David Blume
Waxaa laygu casuumay inaan kaqeybqaato dood cilmiyeed dhowaan kadhacday shirkii Waxsoosaarka Iibinta ee Ururka Maamulka Maareynta Iibka ee Atlanta. Kalfadhigu wuxuu diiradda saarey Is-beddelka Iibka, iyadoo ka-qaybgalayaashu ay soo bandhigayeen fikradahooda iyo fikradahooda ku saabsan dhaqamada ugu wanaagsan iyo arrimaha guusha muhiimka u ah Mid ka mid ah qodobbadii ugu horreeyay ee dooddu waxay isku dayday inay qeexdo ereyga laftiisa. Waa maxay isbeddelka iibku? Miyay si xad dhaaf ah u badan tahay oo macquul tahay in la buunbuuniyo? Is-afgarad guud wuxuu ahaa, si ka duwan waxtarka iibka ama awoodsiinta,